Daawo wasiirka waxbarashada oo kormeertay Iskuullo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Daawo wasiirka waxbarashada oo kormeertay Iskuullo
7th April 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare, Khadar Bashiir Cali ayaa maanta booqatay Iskoolo ku yaala magaalada Muqdishu.
Booqashada Wasiirka ay booqdaan xarumaha waxbarashada si ay da’yarta u dhiiri-geliyaan, waxay kamid tahay tillaabooyinka muujinaya xiriirka ka dhaxeeya siyaasiyiinta iyo bulshada quudata Aqoonta ama Bahda waxbarashada.
Drs Khadar Bashiir Cali Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ayaa maanta booqatay Iskuulada Dowladda ee lacag la’aanta lagu dhigto gaar-ahaan Iskuulka 11 Janaayo oo ku yaalo Degmada Cabdicaziis ee Magaalada Muqdishu, waxeyna soo indha indheysay qaabka Waxbarashada ay u socoto iyadoo si toos ah su’aalo mid mid u weydiineysay Ardayda Fasalada ku jirtay.
Wasiirka ayaa sheegtay iney si aad ah ugu farxday qaabka Waxbarashada ay u socoto, waxeyna booqashadeeda ku dhiira galineysay Waxbarashada Bilaashka ah ee loo simanyahay.
Wasiirada ayaa sheegtay iney kor u qaadi doonaan tayada Iskuulada dowlada islamarkaana sanadkaan laga qaadi doono dalka oo dhan Imtixaan Qaran.
Drs. Khadar Bashiir ayaa faslada Iskuulka mid mid u booqatay, waxeyna sheegtay in Ubadka Soomaaliyeed ee wax ku baranaya dalkooda sida kuwaan oo kale ay mudanyihiin in la dhiiragaliyo oo laga taageero sidii kor loogu qaadi lahaa aqoontooda.
Sidoo kale Drs Khadra ayaa xustay in Wasaaradda Waxbarshada ay ka go’antahay soo nooleynta iyo xoojinta Iskuulada Dowladda si Canug waliba oo Soomaaliyeed uu u helo Waxbarsho lacag la’aan ah waayow waxey tiri Waxbarashada lacag la’aanta ah waa loo simanyahay oo malahan kala sareyn soo celinteedana dalka iyo dadka ayey faa’iido u tahay.
Ugu danbeyntii Maamulka iyo Macalimiinta Iskuulada Dowlada ayaa u mahadnaqay Wasiirada Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta sare booqashada ay ku tagtay Iskuulada taas oo ay ku dhiira galineyso Waxbarashada loo simanyahay ee bilaashka ah.
Madaxweyne Xasan: Alshabaab darbi ma celin karo
Hay’ada Culimada oo cambaareysay weerarkii Gaarisa